China HSL-CNC3826 otomatiki Girazi Kutema Muchina vagadziri uye vanotengesa | Huashili
Iyi modhi igirazi yekucheka girazi, iyo inosanganisa otomatiki girazi otomatiki kunyora uye otomatiki yekucheka muchina. Iyo inokodzera yakatwasuka uye yakaumbwa kucheka kwegirazi mukuvaka, kushongedza, midziyo yemumba, magirazi, uye hunyanzvi.
Gonesa iyo dongle (zvinoenderana nesisitimu)
Yero mavhiri (ane screws)
Yemukati hexagonal wrench
rinobva vharafu 4V21008B (24V)
Servo driver driver
Manual mafuta anogona
Mhepo pombi tee kubatanidza nekukurumidza plug
Zvishandiso tsoka： 7 mativi emamita
Anoshanda: Kupwanya girazi：2 vanhu（Vanhu vane ruzivo rwekupwanya girazi vanogona kushandisa zvirinani yekucheka kugona）
Zvimiro 1.Iyo mhedzisiro yakakosha mota uye inounzwa yakakwira-chaiyo racks uye zvimwe zvepamusoro-chikamu zvikamu zvinonyatso kuvimbisa kurongeka uye kugadzikana kwekucheka kwegirazi, vane hupenyu hwakareba hwebasa uye vanogona kusangana nekucheka kwemaumbirwo akasiyana egirazi ；2.Integrated njanji, yakasarudzika patent, yakatemwa girazi ine yakakwirira chaiyo;3.The muchina tafura chakagadzirwa isapinda, fireproof, mukuru uye pasi tembiricha nemishonga, uye anticorrosive zvinhu, izvo haazombofi deform;
4.Infrared kushanda pakuvheneka pfungwa basa uye michini kushanda pakuvheneka inokosha-zvakaumbwa template basa;
5.Highly akangwara kucheka muchina optimization software, iyo inovandudza zvakanyanya girazi mashandisiro uye inoderedza zvigadzirwa zvekugadzira ；
6.Air-inoyerera basa, kugadzirisa basa kushanda, kunouya otomatiki kurodha muchina uye kupatsanura muchina;
7.Automatic oiri jekiseni uye otomatiki kumanikidza kugadzirisa basa rekucheka muchina, zvinobudirira kuvimbisa kutema kugadzikana uye kucheka maitiro.
8.Hakuna zvakakosha zvinodiwa kune vanoshanda, mashandiro mashoma uye nyore manejimendi.
Chikamu Chirongwa Mirayiridzo yeProjekti
Mabasa Standard mabasa Kucheka optimization software 1.Professional girazi rekucheka uye rakagadziriswazve kuisa mushe basa: inovandudza zvakanyanya chiyero chegirazi nekugadzira kugona.Inopindirana neItaly OPTIMA yakagadziridzwa software uye yekumba GUIYOU software yakajairwa G kodhi: Ziva iyo yakasarudzika yemhando dzakasiyana mafaira.3.Fault kuongororwa uye alarm basa: Iyo inogona otomatiki kunyora inomhanya mamiriro emuchina mune yekugadzira maitiro, mhosva alarm uye kuratidza matambudziko.
Fiber Laser Positioning 1. otomatiki kumucheto-kutsvaga uye kumisikidza girazi: Yakanyatso kuyerwa kwenzvimbo chaiyo uye yekutsausa kona yegirazi, uchiona otomatiki kugadzirisa kwenzira yekucheka nzira yejasi, nekuvandudza mashandiro2.Ingwara yakaumbwa pakuvheneka: Iyo detector inogona kungwara tarisa izvo zvakaumbwa zvinhu uye otomatiki kuburitsa giraidhi kuti uone contour yekucheka.
Girazi kuputsa basa Isa iyo ejector tsvimbo papuratifomu yekucheka. Iyo humburumbira inosundira iyo ejector tsvimbo kuti ibvise girazi.
Machine Kufamba Chimiro chepasi chemuchina chakashongedzerwa nemavhiri enylon anorema-mana epasi rese kuitira kuti mutengi asundire kufamba. Mushure mekumira, tsoka ina dzinochinjika kuti dzitsigire kubata kwakatsiga kwemuchina
Inesarudzo basa Otomatiki kunyora Tsiva manyorerwo emawoko. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, iyo anodhinda anodhindisa zvinyorwa zvinorekodha ruzivo rwegirazi. Chitauro chinoiswa kune inoenderana girazi pamusoro neiyo yekunyora humburumbira.（Tinokurudzira vatengi kugadzirisa basa rekunyora）
KutakuraZvimiro Iyo yekucheka chikuva yakagadzirirwa nebhandi rekutakura. Iko hakuna kudikanwa kwekushandura girazi nemaoko. Girazi rakatemwa rinogona kuendeswa kumhepo inoyerera girazi ichityora tafura kuburikidza neyakaendesa bhandi, uye iko kuvhunika kunoitwa patafura yekupwanya girazi.（Unoda kutenga girazi rinoyangarara tafura）
Kuchembera kurapwa mushure mekumonera kwezvikamu zvakakora. Rutivi danda kugadzira ndiro inoitwa ne gantry hwokugaya hwakarurama uye kugadzikana.
Patent maindasitiri aruminiyamu anoumbwa neT-WIN mutsara njanji, yakanyanya kunyatsoita, yakaderera ruzha, chimiro chakasarudzika chemidziyo yepamusoro
Patent maindasitiri aruminiyamu anoumbwa yakatwasuka yakatenderera njanji, njanji vhiri rinotakura kugona, kutenderera munzira, kuderera kukwesana kunogona kuona kugadzikana kushanda kwebhiriji rekucheka
Yakasarudzika yepamusoro-simba fan, yakasimba mhepo kumanikidza uye kuyerera kukuru, simbisa yakatsetseka girazi kuyangarara.
Iyo yepamusoro-density isina mvura bhodhi iri substrate, uye iyo yepamusoro yakafukidzwa neanti-static maindasitiri akanzwa. Ita shuwa kushandiswa kwakagadzikana munzvimbo dzakanyorovera.
Kugamuchira helical rack uye piniini dhizaini yekuvandudza zino simba pasimba uye zvinobudirira kudzora ruzha
Yakakwirira simba 7525 chinyararire chinodhonza cheni
Iko kugoverwa kwemafuta kwebara rekucheka kunotora iyo pneumatic otomatiki oiri yekuzadza nzira, pasina chinyorwa kupindira.
Kucheka mota mota
2 seta yakakwira kuita kwemaindasitiri kudzora yakatsaurwa servo mota yekunyatso kudzora uye kumeso kushanda.
Huashil yakakosha yekudzora bhodhi kadhi, Gugao PLC inodzora system.
Zvishandiso Panasonic laser michina inotumirwa kubva kuJapan.
Dell kuratidza, Tsanangudzo yepamusoro uye kugadzikana kuita
Yakakwira-kuita komputa inomiririra yeindasitiri kutonga; chiratidzo chepamusoro-resolution kuratidza.
Yakatumirwa kune dzimwe nyika yekutanga-mutsara brand control zvikamu senge OMRON, AirTAC.
Kureba * upamhi * kukwirira: 3350mm * 3000mm * 1400mm
7.5kW, Shandisa simba3KW
Cheka girazi ukobvu
≤ ± 0.2mm / m （Kubva pane saizi yetambo yekucheka girazi risati ratsemuka）
Linear mativi njanji
X akabatana servo injini
1.8KW * 2Intel machipisi
Y akabatana servo mota
Mhepo inoyerera mudziyo
Zvadaro: HSL-YTJ2621 otomatiki Girazi Kutema Muchina
Otomatiki Kuisa Cnc Girazi Kucheka Tafura
3829 otomatiki Girazi Kurodha uye Kucheka Muchina